Cayman Islands Vaovao fanavaozana amin'ny COVID-19
Home » fanorenana » Cayman Islands Vaovao fanavaozana amin'ny COVID-19
Fanavaozana ofisialy ny Nosy Cayman
Amin'ny Alatsinainy 11 Mey 2020, fanavaozana ofisialy an'ny Nosy Cayman amin'ny Covid-19 dia natolotra tamin'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety milaza fa tranga telo tsara sy 761 no ratsy voalaza. Ankoatr'izay, fitaovana fampandehanana fiara roa any an-toerana no manara-maso 300 isan'andro. Eo anelanelan'ny HSA, Hopitaly Dokotera CTMH sy Nosy Health Cayman Islands ny tanjona andrana isan'andro dia 450.
Ankoatr'izay, hopitaly an-tsaha roa no miasa, raha ilaina izany raha ilaina ny mampiasa azy ireo.
Notarihin'i Pasteur Kathy Ebanks ny vavaka isan'andro.
Mpitsabo ny fahasalamana, Dr. Samuel Williams-Rodriquez nitatitra:
Amin'ny valim-panadinana 764 hotaterina anio, 761 no ratsy ary telo no tsara. Amin'ireny, ny iray dia fifandraisan'ny marary fantatra tsara ary tsy miteraka soritr'aretina; ny roa hafa dia ampahany amin'ny fanadihadiana mitohy ary samy tsy simptomatika.
620 tamin'ireo fitsapana 764 notaterina androany no nohamarinina tao amin'ny laboratoara HSA ary 144 no tao amin'ny Hopitaly Dokotera. Ireo dia fitambaran'ny valin'ny fizahana ny fizarana samihafa amin'ny mponina sy ny fanaraha-maso fanaraha-maso ataon'ny Fahasalamam-bahoaka.
Ny fitantanana ny Supermarket'i Kirk dia nifandray akaiky tamin'ny Fahasalamam-bahoaka ary olona 121 no notsapaina hatreto; Ny isan-jaton'ny "ambany dia ambany" amin'ireo dia miabo ary amin'ny faran'ny rahampitso (talata), ny drafitra dia ny hamita ny fitiliana ny tsirairay ao amin'ny supermarket. Ny fitsapana rehetra dia nataon'ny HSA. Ny fanadiovana lalina dia notontosain'ny fivarotana lehibe, notarihin'ny departemantan'ny fahasalamana ara-tontolo iainana. Ny HSA sy ny Hopitaly Dokotera dia hanohy ny fanaovana fizahana ireo mpiasa sisa rehetra.
Amin'ireo 84 tsara hatreto dia 47 no efa sitrana, 36 no marary mavitrika ary tsy misy marary miaiky.
Ny tobim-pahasalamana Flu ny zoma dia nahitana marary 10, 5 ny sabotsy ary 2 ny alahady; ny 'Flu Hotline dia nahazo antso 23 ny zoma 23 ny sabotsy ary 10 ny alahady.
Amin'izao fotoana izao dia misy olona 95 ao amin'ny tobin'ny governemanta mitokana sy olona 98 momba ny Fahasalamam-bahoaka.
Olona 4,187 XNUMX no notsapaina tao amin'ny Nosy Cayman hatreto.
Ireo olona izay efa niantsena tao amin'ny supermarket dia tsy mila miahiahy raha toa ka nanara-dalàna rehetra voalaza: mitandrina ny halaviran'ny fiaraha-monina, manao saron-tava ary tsy mikasika ny tarehy; ary koa nanasa tànana tsara rehefa mody.
Toeram-pivoarana roa ho an'ny fizahana no nahitana marary 300 isan'andro. Ny HSA koa dia mandeha amin'ny orinasa lehibe ary manao fitiliana any, izay hitohy.
Amin'ity dingana ity dia tsy misy drafitra hitsapana an-tsokosoko ny nosy iray manontolo. Ny fifantohana dia ireo olona manana fifandraisana bebe kokoa amin'ny vahoaka toy ny mpiasa an-tsokosoko ao amin'ny tobim-pahasalamana, fivarotana lehibe, tobin-tsolika ary fivarotam-panafody. Mandeha ihany koa ny fanandramana ny fizahana ny Cayman Brac.
Mbola tsy vita ny fisavana ireo fonja; na izany aza, ny ankamaroan'ny mpiasan'ny fonja dia vita ary koa ny voafonja sasany; tsy nisy nanaporofo ny maha-tsara azy amin'izao.
Anisan'ireo fotodrafitrasa, tanjona ny hamita andrana 450 isan'andro.
Ny isan'ny mpiasa eo alohan'izay mizaha toetra tsara dia "tena ambany dia ambany".
Ny olona tonga dia tsy maintsy mijanona ao amin'ny quarantine mandritra ny 14 andro, aorian'izay dia tsy maintsy mizaha toetra ratsy izy ireo vao hafahana ao amin'ny fiarahamonina.
Ny fifampiresahana izay arahana dia mifototra amin'ny torolàlana iraisam-pirenena ary mandrakotra ny olona rehetra ao an-trano, ary koa ny mpiara-miasa ao amin'ny iray metatra na latsaka akaikin'ny olona tsara mandritra ny 15 minitra na mihoatra. Ka amin'ny ankapobeny, olona 15-25 koa no voasivana ho mpifandray rehefa mizaha toetra tsara ny olona iray.
Ny valiny tamin'ny faran'ny herinandro izay misy fika 761 dia "tena mampahery" ary manasongadina ny fahombiazan'ny fitiliana sy ny rafitra napetraka ankehitriny hiatrehana ny viriosy any amin'ny Nosy Cayman.
Na izany aza, marihina ihany koa fa ny lafy tsara telo dia tsy misy fambara, manome toky ny fiheverana fa mety hisy bebe kokoa eo amin'ny fiarahamonina. Io indray dia mampiseho fa ny fanokafana indray ny hetsika ataon'ny fiarahamonina dia tokony horaisina amin'ny fomba maodely fa tsy amin'ny alina. Ny famerana napetraka dia mandeha. Iantsoana ny faharetana.
Ny ampahany manaraka haverina misokatra, saingy miadana sy mandeha tsikelikely, dia ny indostrian'ny fampandrosoana sy ny fananganana, izay hamotsorana mpiasa 8,000 eo ho eo. Io dia hamerina amin'ny laoniny ny toekarena sy hitohizan'ny asa any amin'ireo Nosy amin'ny herinandro ho avy.
Hampahafantarina tsy ho ela ny drafitra ho an'ireo mpiasa mpanao fanaraha-maso. Ohatra, ny toeram-pidiovana dia tsy maintsy apetraka amin'ny toerana fanamboarana mba hahafahan'ny mpiasa misasa tanana, mahazo sy mihinana sakafo atahorana ny mpiara-miasa aminy.
Fampandehanana fiara fitaterana an-tserasera indroa eo anoloana no nanomboka niasa. Jereo ny sidebar etsy ambany raha mila fanazavana.
Ary, mba hanohanana ireo trano fitahirizana trano dia hosokafana amin'ny dingana manaraka koa, izay amin'ny herinandro iray hafa, miorina amin'ny valin'ny fitiliana hatrany amin'ny Grand Cayman. Ity hetsika ity dia hampitombo ny isan'ny mpanjifa miantsena ao an-trano ary noho izany dia atahorana ny fampitana ny fiarahamonina. Hamafisina ny lalàna manalavitra ny vatana.
Na eo aza ny faneriterena tsy an-kijanona hanokatra ny Nosy Cayman sy ny toekareny, ny "etos" an'ny Governemanta dia mitohy ho "sarobidy ny fiainana" ary noho izany ny fahatratrarana efa nisy tamim-pitandremana sy ny fahafoizan-tenan'ny firenentsika dia tsy azo ariana amin'ny fanokafana faobe. Ny lesona dia azo raisina amin'ny faritra hafa manokatra ny fiarahamonin'izy ireo.
Ny faharetan'ny vondrom-piarahamonina dia angatahina satria ny tanjona dia ny hamoha “somary ela” kokoa fa amin'ny fomba am-pitandremana.
Mandeha ny fitsapana sy ny fizahana ary mandeha ny paikadim-panjakana momba ny famonoana viriosy, indrindra miaraka amin'ny rafi-pitsapana matanjaka sy ny fitomboan'ny fisavana.
Ny fitsapana an'i Cayman isan-kapita dia anisan'ireo 15 voalohany manerantany.
Mikasika ny sidina famindran-toerana dia misy seza maromaro amin'ny sidina Repoblika Dominikanina kasaina hatao ny Alahady 17 Mey. Raha mila famandrihana dia mifandraisa mivantana amin'i Cayman Airways amin'ny 949-2311 na hamandriho amin'ny tranokalan'ny CAL.
UK dia mitana andraikitra voalohany amin'ny famoronana vaksinina. "UK dia iray amin'ireo mpamatsy vola lehibe indrindra amin'ny fiaraha-miasa manerantany amin'ny vaksininy sy ny fanefitra vaksiny, fantatra amin'ny anarana hoe Gavi. Amin'ny 4-5 Jona, hampiantrano fihaonamben'ny Vaksinim-pirenena Iraisampirenena i UK, miaraka amina firenena sy fikambanana hanaraka ny fitarihan'ny UK amin'ny fampiasam-bola amin'ny asan'i Gavi. ”
Nomeny antsoantso mafy ho an'ny ekipa mpanara-maso anatiny ny governemanta noho ny anjara asany mavitrika amin'ny valin'ny COVID-19 tamin'ny alàlan'ny laharam-pahamehana sy ny fiasana mora tanterahina.
Ny minisitra dia nanao antsoantso mafy tamin'i Popeye's sy Burger King tamin'ny fanomezana sakafo ho an'ny HSA ao Grand Cayman sy Star Island ho an'ny sakafo ho an'ny mpiasan'ny Hopitaly Faith ao Cayman Brac.
Natsangana ny trano hopitaly sahaza 60 fandriana ary efa vonona hampiasaina, raha ilaina izany. Raha mila tsipiriany, jereo sidebar etsy ambany.
Kaomiseran'ny polisy, Andriamatoa Derek Byrne mampatsiahy ny besinimaro:
Miaraka amin'ny fanalefahana ny famerana tsy fahazoana mivezivezy any Little Cayman sy Cayman Brac tamin'ny herinandro lasa teo dia mijanona ao amin'ny 15 May 2020 amin'ny 5 maraina ireo fameperana tsy fahazoana mivezivezy.
Ny curfew malefaka na ny Fitsipika momba ny Toerana ao amin'ny Grand Cayman dia mijanona eo anelanelan'ny ora 5 maraina ka hatramin'ny 8 hariva isan'andro Alatsinainy ka hatramin'ny Asabotsy.
Hard Curfew na fanidiana tanteraka, afa-tsy ireo mpiasan'ny serivisy tena ilaina tsy voatanisa dia mijanona ao amin'ny Cayman Brac eo anelanelan'ny adin'ny 8 alina sy 5 maraina ny Alatsinainy hatramin'ny Alahady. Amin'ny Grand Cayman, dia ora tsy azo ihodivirana mafy eo anelanelan'ny adin'ny 8 alina sy 5 hariva ny Alatsinainy ka hatramin'ny Alahady ary ny ora tsy azo ihodivirana mafy mandritra ny 24 ora amin'ny Alahady - manomboka amin'ny asabotsy alina ka hatramin'ny alin'ny sasakalina.
Ny vanim-potoanan'ny fampihetseham-batana tsy mihoatra ny 90 minitra dia avela eo anelanelan'ny adin'ny 5.15 maraina ka hatramin'ny 7 hariva isan'andro Alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy. Tsy misy fotoana fanatanjahan-tena avela amin'ny alahady mandritra ny fe-potoana tsy fahazoana mivezivezy. Tsy misy ifandraisany amin'i Grand Cayman izany satria nesorina tao Cayman Brac sy Little Cayman ireo fameperana ireo.
Ny fe-potoana tsy azo ihodivirana mafy mandritra ny 24 ora satria mifandraika amin'ny Beach Access to Public Beaches ao Grand Cayman dia mijanona hatrany amin'ny zoma 15 Mey amin'ny 5 maraina. Midika izany fa tsy misy fidirana amin'ny morontsiraka ampahibemaso amin'ny GC na oviana na oviana hatramin'ny Zoma 15 Mey amin'ny 5 maraina. Izany dia mandrara ny olona tsy hiditra, handeha an-tongotra, milomano, snorkeling, manjono, na manao karazana hetsika an-dranomasina amin'ny morontsiraka rehetra amin'ny Grand Cayman. Ity fameperana ity dia nesorina tao amin'ny Cayman Brac nanomboka ny Alakamisy 7 Mey hariva.
Ny fanitsakitsahana ny baiko henjana mafy dia ny fandikan-dalàna mitentina 3,000 XNUMX KYD $ ary fanagadrana mandritra ny herintaona, na izy roa.
Sidebar: Ny praiminisitra dia manasongadina ny fanitarana HSA ny fahaizan'ny fitsapana COVID
Nanitatra ny fahafaha-manao andrana amin'ny fizahana COVID-19 ny manampahefana misahana ny fahasalamana amin'ny alàlan'ny fisokafan'ny fiara roa amin'ny alàlan'ny tranolay fitiliana ho an'ny mpiasa eo anoloana ary ny fanitarana ny laboratoara mba hampitomboana ny fanodinana santionany ao anatin'ny iray andro.
Nilaza ny Tale Jeneralin'ny HSA Lizzette Yearwood fa faly izy tamin'ny fandehan'ny fizahana hatramin'ny nanokafana ny herinandro lasa teo. "Betsaka ny lozisialy sy ny dingana ao anatin'ilay fizotrany hahazoana antoka fa miasa araka izay tratra izy."
Rehefa tonga tao amin'ny HSA's drive amin'ny alàlan'ny faritra fitiliana dia maharitra 5 minitra ny fizotrany rehetra.
Nanitatra ny haben'ny laboratoara ara-batana ihany koa ny HSA tao amin'ny Hopitaly Cayman Islands, niara-niasa tamin'ny laboratoara tsy miankina ary nanakarama sy nampiofana mpiasa laboratoara fanampiny mba hampitomboana ny fahafahan'ny fitiliana. "Ezaka lehibe nataon'ny olona maro ny hahatongavantsika amin'izao fotoana izao, ary manohy mitady fomba hampitomboana ny fahafaha-manao fitiliana izahay, hoy i Yearwood. "Ireo fanatsarana sy fanitarana farany ireo dia dingana lehibe iray mankany amin'ny làlana tsara hanatsarana ny fitiliana."
Ny fahasalamam-bahoaka dia mandahatra fotoana amin'ny mpiasa amin'ny laharam-pahamehana ho an'ny ho avy azo tsinjaraina raha toa ka mihalalaka ny ezaka fitiliana. Ny mpiasa laharana 2 sy ny isan-jaton'ny mpiasan'ny fananganana dia kasaina hatao amin'ny fisavana. Ny HSA, ny fahasalamam-bahoaka ary ny Lehiben'ny mpitsabo dia miara-miasa amin'ny laharam-pahamehana amin'ny olona na orinasa izay heverina ho mpiasa laharana voalohany.
“An'arivony ny olona heverina fa mpiasa an-tsokosoko, ka afaka herinandro vitsivitsy vao tafavoaka amin'ny maro an'isa. Fantatray fa misy ny fitaintainanana amin'ny vahoaka amin'ny ankapobeny mba hosedraina, ka manao izay rehetra azo atao izahay mba hijerena olona mendrika araka izay tratra, "hoy ny Dr Samuel Williams-Rodriguez, tompon'andraikitra amin'ny fahasalamana. "Ankoatry ny fizahana amin'ny alàlan'ny fisavana, ireo mpikambana avy amin'ny Fahasalamam-bahoaka koa dia manao fanaraha-maso eny an-toerana ho an'ireo orinasa lehibe kokoa, ahafahan'ny mpiasa misintona tsy mila miala amin'ny toeram-piasana."
Ireo olona nosavaina ho an'ny COVID-19 dia hahazo valiny amin'ny alàlan'ny MyHSA Patient Portal amin'ny Internet, izay manome fomba azo antoka hahazoana ny valin'ny laboratoara. Ny Fahasalamam-bahoaka dia hanohy hifandray amin'ireo olona rehetra manaporofo fa miabo amin'ny COVID amin'ny alàlan'ny telefaona. Homena kaonty vavahady marary maimaimpoana ny olona rehetra nohamarinina.
Satria krizy nasionaly ny areti-mandringana COVID, dia miara-miasa amin'ireo hopitaly tsy miankina eto an-toerana ny HSA amin'ny fikajiana mpiasa ilaina faran'izay betsaka.
"Miara-miasa amin'ny Hopitaly Dokotera izahay izao amin'ny alàlan'ny fandefasana orinasa isan-karazany amin'izy ireo mba hojerena mba hampitomboana ny fahaizan'izy ireo mitsapa," hoy i Dr Samuel Williams-Rodriguez, tompon'andraikitra amin'ny fahasalamana. “Toerana fitiliana fanampiny ho an'ireo mpiasa tena ilaina ao amin'ny Distrika Atsinanana ny Nosy Health Cayman Islands.”
Ny toeram-pisavana rehetra dia amin'ny alàlan'ny fanendrena ihany ary ny orinasa dia hifandray amin'ny Fahasalamam-bahoaka amin'ny fotoana voatondro manokana.
Sidebar 2: Ny minisitra Seymour dia manasongadina ny tobim-pitsaboana hafa
“Azontsika atao ny manaiky fa ny areti-mifindra COVID-19 dia traikefa nianarana ho antsika rehetra, indrindra ireo izay voatahy hanompo ao anatin'ny governemanta. Tokony hianatra hifanaraka haingana isika rehefa mivoatra ny fampahalalana rehefa mamorona drafitra fifanarahana mety ho an'ny firenentsika. Anisan'izany drafitra izany ny hopitaly an-tsaha izay mahazaka marary mihoatra ny COVID-19 raha toa ka mahatratra ny fahaizany ny tobim-pahasalamantsika.
Ny zoma, ny mpikambana ao amin'ny Komitin'ny vonjy taitra nasionaly na ny NEOC, ireo mpitarika ny HSA sy ireo mpitsabo hafa dia nitety ny Family Life Alternate Medical Center. Ity efitrano fandriana enimpolo ity dia namboarina feno hipetrahan'ny marary raha sendra miverina amin'ny tranga COVID-19. Na dia manantena am-pahatsorana sy mivavaka aza isika mba tsy hanana olona maro mitaky hopitaly, ny fiomanana amin'ny tranga toy izany dia zava-dehibe amin'ny famonjena aina.
Ny hopitaly an-tsaha dia fantatra ho fepetra dingana 4 amin'ny Cayman Islands Clinical Guide for COVID-19 Management. Toeram-pivarotana maro no nohamarinina, ary ny Family Life Center no voaporofo fa vahaolana tsara indrindra mifototra amin'ny habeny, ny onjam-peo sahaza ary ny akaikin'ny Hopitaly Cayman Islands. Raha ilaina dia mitaky mpiasa 120, na klinika na tsy klinika, ny toeram-pitsaboana hiasa amin'ny fahaizany feno. Ny Family Life Alternate Medical Center dia hitantana ny Dr. Delroy Jefferson, talen'ny fitsaboana HSA; Dr. Elizabeth McLaughlin, Lehiben'ny lozam-pifamoivoizana sy ny vonjy taitra HSA; ary Gillian Barlow, mpitantana ny mpitsabo mpanampy HSA.
Ny Family Life Alternate Medical Center dia natao tamin'ny alàlan'ny fiaraha-miombon'antoka amin'ny sehatra tsy miankina sy tsy miankina. Ny fankasitrahana manokana dia an'Andriamatoa Simon Griffiths ao amin'ny departemantan'ny Asa vaventy izay nitantana ny tetik'asa ary niara-niasa akaiky tamin'ny HSA Clinical Task Force, NEOC, indrindra ny mpitantana ny tetikasa Graeme Jackson NEOC, ary ny mpitsabo tsy miankina manokana mba hahazoana antoka fa ho feno ny fepetra ilaina amin'ny fitsaboana. .
Tianay koa ny maneho fisaorana an'i Pastora Alson Ebanks sy ny fiangonany tamin'ny nanomezany ny Family Life Center. ”
Izay voalaza omaly tao amin'ny fanavaozana ofisialy ny Nosy Cayman.
Ny trano fandraisam-bahiny any Azia dia miahiahy bebe kokoa rehefa miakatra ny trosa
Ahoana ny fomba hamerenana amin'ny laoniny ny sidina aorian'ny COVID-19?